Iyadoo telefoonka ah Android ama kiniin ah, oo aad jeceshahay waxaa laga yaabaa in ay hadda ka dibna ka computer wareejiyo music in Android. Markaas, aad ku raaxaysan karaan songs cadaalad-faraxa badan waqti kasta. Waa hagaag, waa effortless si ay u gudbiyaan files music in aad telefoon ama Android kiniin. Halkan, waxaan jeclaan lahaa inaan idin la wadaagno laba jid oo sahlan tahay in la sameeyo.
Habka 1: Nuqul music kombiyuutar si ay Android la barnaamij
Si aad nuqul ka files music in aad telefoon ama Android kiniin si fudud, waxaan jeclaan lahaa in aad ku talin computer si fiican loogu talagalay in ay kala iibsiga Android - Wondershare MobileGo for Android ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) . Iyada oo computer si kala iibsiga Android, waxaad si deg deg ah nuqul karaan dhammaan faylasha music aad Android mar. Intaa waxaa dheer, markii qaabka file music waa in aynan Android, sida WMA, MKA, Amr, barnaamijkan kaa caawin doona inaad wareejiso Android filaayo in mid ka mid ah - MP3.
Download version maxkamad free of MobileGo for Android!
Fiiro gaar ah: In qayb hoose, Waxaan tusi doonaa sida loo wareejiyo music in Android ka your computer socda nidaamka ka hawlgala Windows. Haddii aad doonayso in aad qabato music ku wareejinta on Mac, waa in aad kala soo bixi version Mac ah. Tallaabooyinka ku dhowaad isku mid yihiin.
Step1. Connect Android la your computer
Si aad u bilaabaan oo leh, rakibi iyo abuurtaan PC si kala iibsiga Android on your computer. Connect telefoonka Android ama kiniin aad PC labada via cable USB ama via Wi-Fi (Wi-Fi oo kaliya loo isticmaali karaa in version Windows). Markaas, PC si kala iibsiga Android uu bilaabo inuu ogaado telefoonka aad Android oo kiniin ah. Marka lagu sameeyey, aad Android la soo bandhigi doonaa suuqa kala hoose.
Fiiro gaar ah: Wondershare MobileGo for Android si buuxda u la jaan qaada dhammaan taleefanada Android iyo murriyado, sida Samsung, HTC, iyo Google. Waxaad riix kartaa More si aad u hesho info dheeraad ah oo ku saabsan qalabka Android taageeray.
Step2. Bedelka music kombiyuutar si ay Android phone
Tiirka bidix, guji "Music". Guji "Add". Marka uu furmo suuqa yar booda, waa in aad ka heli heeso aad doonayay. Guji "Open" si ay u dajiyaan. Ama waxaad riixi kartaa saddexagalka rogay yar "Add" ku hoos keeno folder music ama playlists Lugood iyo sidoo.
Inta lagu guda jiro habka music wareejinta ah, haddii file music uu leeyahay qaab leheyn, PC si kala iibsiga Android waxay qaatan si ay socon hal - MP3.
Video ku saabsan yahay sida ay u guuraan music ka computer qalab Android
Habka 2: Download music kombiyuutar si ay Android kaarka SD
Barnaamijka aan, aad dhoofin karo music ka your computer si Android sidoo. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan telefoonka Android ama kiniin ah si aad u computer. Markaas, disk ah ka dhex muuqan doonaa "My Computer". Waxaa fur. Raadi iyo furi folder music ah. Markaas, falgali in meesha aad ku badbaadin music on your computer. Dooro heeso aad doonayay oo iyaga nuqul in folder music ku saabsan telefoonka Android ama kiniin.
Indeed, laba siyaabood ayaa laga heli karaa. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ka doorbidayaa habka 1. Inkasta oo aad dhoofin karo music kombiyuutar si ay Android aan barnaamij kasta ee habka 2, waxaad weli la kulmayso dhibaatooyin qaar ka mid ah. , Haddii aad soo dhoofsadaan qaar ka mid ah heesaha ugu cadcad la format in aynan iyagu kuwiinna ma ahaan karo aad Android. Taa ka sii daran, haddii aad cable USB waa la dumiyey, waxaad buuxin kartaa hawsha. Inkastoo, haddii aad isticmaasho TunesGo, waxaad isticmaali kartaa Wi-Fi. Waxaa si ku haboon.
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Music ka Computer si ay Android